Mareykanka oo cadeeyay mowqifkiisa muddo kordhinta Dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo | Somali Link Newspaper
Guriga Breaking News Mareykanka oo cadeeyay mowqifkiisa muddo kordhinta Dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo
Mareykanka oo cadeeyay mowqifkiisa muddo kordhinta Dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo
Arbaco, April, 14, 2021 (HOL) -Dowladda Mareykanka ayaa si adag uga fal celisay go’aankii uu dhawaanta Baarlamaanka Soomaaliya mudada Labada sano ah ugu kordhiyay Dowladda hadda jirta ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
War ka soo baxay Wasaarradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa ay siweyn uga xumaadeen tallaabada uu qaaday Baarlamaanka Soomaaliya ee mudada Labada sano ah loogu kordhiyay madaxweyne Farmaajo.
War ka soo baxay Wasaarradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in marnaba aysan taageeri doonin muddo korarsi , doorashooyiin is barbar socda amaba geedi socod hal dhinac ah.
Mareykanka ayaa intaa ku darray in hindisa shirciyeeda muddo kordhinta oo la dhaqangaliyo ay caqabad halis ah ku tahay wadaxaajoodyada socda
Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay saxiixay xeerkii doorasho ee Baarlamaanku meelmariyay.
Article horeFinancial crunch worsens Somalia drought woes
Article soo socdaMadaxweyne Farmaajo oo saxiixay sharcigii uu dhawaantan meelmariyay Baarlamaanka Soomaaliya